Zvidiki zvidiki zvechiuno | Kunyora
Diki, tsvarakadenga uye nenjere dzemaoko matinji
Nat Cerezo | 11/10/2021 08:26 | Yakagadziridzwa ku 11/10/2021 08:57 | Mavara pamaoko
Kwete nguva refu yapfuura takatoburitsa chinyorwa pane madiki ma tattoos ewrist. Kana pane chimwe chinhu chakanaka pamusoro pemhando idzi dzema tattoos, ndezvekuti kunze kwekuchenjerera, ivo vakanaka kwazvo. Nyangwe zvenyama ndingashinga kutaura.
Sezvandakataura panguva iyoyo, wrist ndiyo imwe yenzvimbo dzinofarirwa nevakadzi kuti vatore tattoo yavo yekutanga. Mikana yacho yakawanda, kunyange zvazvo maitiro acho dzimwe nguva achiita basa rinokosha zvikuru. Tevere isu tichakupa iwe mashoma mazano nezve ino tattoo uye maitiro ekuishandisa.
1 Mazano uye zvinoreva ma tatoo paruoko
1.1 Matatoo emoyo
1.2 Rose nyora
1.4 Nyeredzi nyora
1.6 Diki anchor tattoos
1.8 Diki Semicolon Tattoo
2 Nzira yekushandisa nayo
3 Tatoo paruoko inorwadza here?
4 Ndeupi mutengo wetattoo duku yakadaro?
5 Mifananidzo yeWrist Tattoos
Mazano uye zvinoreva ma tatoo paruoko
Mitsara, zviratidzo zviduku zvakadai senyeredzi kana mhuka dzakadai seshiri kana silhouette yenzou yakanaka ndeimwe yezvinyorwa zvinowanzoonekwa zvatichawana pamaoko evanhu vakawanda. Zvino, sekutaura kwangu, haisi stereotype, kunyange fashoni ichidaro inoita kuti tifunge nezvayo. Kana tikafunga nezvazvo, tinogona kuita zvakasiyana-siyana matinji enyama. Zvese zvinhu inyaya yekuravira uye nezvatinazvo mupfungwa.
Mukusarudzwa kudiki kwematatto madiki pachiwoko tinogona kuwana mhando dzakasiyana dzematatoo semiti, shiri, mavara kana zviratidzo. Chero zvazvingava, gara uri mutema uye pasina kuwandisa tattoo. Aya anonyanya kuve akapfava, akatsetseka uye akatsetseka sitiroko.
Mwoyo maTattoo anozivikanwa uye anowanzo mirira anofara, ane shungu kana rudo nguva muhupenyu hwedu. Zvinoenderana neruvara rwayo zvinoreva chinhu chimwe kana chimwe. Semuenzaniso, mwoyo mutema unofananidzira kuti munhu ari kupfuura nepakati pekuchema uye ruvara rweyero mavambo matsva. Nekuda kwekusiyana uku ivo vakanaka kupfeka mune ino chikamu chemuviri.
Roses seakadaro anotofananidzira zvinhu zvakawanda zvakanaka semutsa, kutenda, tsitsi uye kunaka kwemunhu. Kunyange zvakare zvarinoreva zvinogona kusiyana zvichienderana neruvara ruva iri. Semuenzaniso, pink inoreva kusava nemhosva, dema inofananidzira kurasikirwa, uye tsvuku inofananidzira chido. Kune rumwe rutivi, kana iwe uchida roses zvakanyanya iwe unogona tattoo kubva kune rose petal kusvika kune rose bouquet, chero bedzi iri nyore mumutsara ichaita yakanaka kwazvo.
Muchinjikwa tattoos anowanzo kubatanidzwa nechiKristu uye muzvidimbu zvidiki zvakadaro zvinowanzoenda ega kana zvinosanganiswa nemifananidzo yematavi emiorivhi, njiva ... Pamusoro pezvo, kune mimwe michinjikwa mizhinji ine zvishoma kana kuti isina chekuita nechiKristu semuchinjiko weCeltic unomiririra tariro kana ankh (rudzi rwemuchinjikwa weEgipita) unofananidzira hupenyu.
Nyeredzi tattoos dzine zvakawanda zvazvinoreva. Tine nyeredzi dzedenga dzakashanda segwara kune vakawanda vafambi uye pakati pezvinoreva zvakajairika igwara, ndiko kuti, iro. iyo nyeredzi iyo yawanyora nyora inoratidza kosi. Muchiuto mune mitsetse yakawanda inomiririrwa nenyeredzi, saka inogonawo kuva chiratidzo chekuremekedzwa.
Iyo yakajairika diki tattoo yeruoko ndeye date tattoo. Rinogona kunge riri zuva rakakosha kwauri. Kuzvarwa kwako, kuzvarwa kwemwana wako, zuva rako remuchato, kufa kwehama yepedyo kana shamwari ...
Diki anchor tattoos
Anchor tattoos aimbove matatoo evafambisi vengarava, kunyangwe iye zvino sema tatoo ave kuoneka uye nehunyanzvi hwekuita, vakawana zvirevo zvitsva. Kufanana, semuenzaniso, simba kana kutsungirira, nezvikonzero zviri pachena; kukudza nhengo yemhuri yakafa kana shamwari kana kunyange kumiririra kubatana kukuru negungwa.
Chiratidzo chisingaverengeki ndechimwe chezvinyorwa zvakakurumbira munyika. Ine zvirevo zvakati wandei, sematatoo ese, chimwe chazvo ndechekuti munhu ane mikana isingaperi yekuzadzisa zvaakaronga kuti aite. Chimwe chinoratidza kudavira kuberekwazve, kukwanisa kuratidza kuti chimwe chinhu hachina magumo, kuti pasinei nokuti chinoita seinoguma sei, zvinhu zvose zvichatanga zvakare, zvinogonawo kubatanidzwa nekutenderera kwemwaka.
Diki Semicolon Tattoo
Semicolon inowanzoratidza kuti une (kana kuti wakatambura) kuora mwoyo, kupindwa muropa, kuti wakaedzwa kuzviuraya kana kuti une dambudziko repfungwa. Zvinogona zvakare kunge kuti munhu akapfeka iyo tatoo ane nhengo yemhuri kana shamwari iyo yapfuura neimwe yeaya matambudziko uye inoda kuratidza kubatana navo. Iyo dhizaini yakakwana kuratidza danho rekuvandudza uye chiyeuchidzo chesimba rako remukati.
Nzira yekushandisa nayo
Kazhinji ma tatoo pamaoko anoratidzirwa nekuve akanyanya minimalist, nekuti nzvimbo yacho haipe zvakawanda. Izvi hazvireve kuti zvishamiso zvechokwadi hazvigone kuitwa, asi zvinofanirwa kutakurwa mupfungwa kuti kukatyamara kwakawanda kunoita tattoo, iko kuswedera uye kuwedzera kwavari, isu tinoisa njodzi yekuti, nekufamba kwenguva, vanozopedzisira vava kuita blur of ink. Saka muzviitiko izvi, zviri nyore zvinokurudzirwa kupfuura zvimwe zvese.
Uyewo, idzi mhando dzematatoo dzinowanzo neinki nhema nekuda kwechikonzero chimwe chete. Izvi hazvirevi kuti ruvara harugoni kushandiswa, kunyange zvazvo zvichida inongova tsanangudzo. Mune ino kesi, zvingave zviri nyore kukurukura nezvazvo neako tattoo artist kuti uone zvingaitwe.
Tatoo paruoko inorwadza here?
Haisi iyo inorwadza zvakanyanya nzvimbo yemuviri kwatinogona kutora tattoo, asi zvinozorwadza zvakanyanya kupfuura munzvimbo dzakaita seruboshwe kana pfudzi. Sezvenguva dzose, kurwadziwa kunoenderana zvakanyanya pane imwe neimwe, nekuti munhu mumwe nemumwe ane yake buri.
Ndeupi mutengo wetattoo duku yakadaro?
Kazhinji mutengo wakaderera unogona kutenderedza 60 euros, kunyangwe izvi zvinoenderana ne studio yega yega, yega tattoo muimbi uye tattoo iyo munhu anoda kutora. Zvingaite kunge zvinodhura Kunyangwe zvichifanirwa kuverengerwa kuti kune mutengo weiyo tattoo art muinki netsono, iyo nguva inoiswa mari yekuzviita uye kugadzirira dhizaini.. Tiri kutaura nezvebasa reunyanzvi uye nekuda kweizvi hatifanire kusvetuka, iwe unotoziva kuti chirevo chinoenda sei: zvakachipa zvinodhura.
Sezvauri kuona, une zvakawanda zvingasarudzwa zvekutora tattoo paruoko rwako.Iwe unongofanirwa kuwana yako uye kunyura nemusoro kuti iwe waunovimba naye tattoo muimbi aite zvimwe. Ndeipi dhizaini yaunonyanya kufarira? Unoifarira muruvara here kana kuti dema nechena? Iwe une ma tatoo paruoko rwako here?
Mifananidzo yeWrist Tattoos
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Tattoos pamusoro » Mavara pamaoko » Diki, tsvarakadenga uye nenjere dzemaoko matinji
Masaga emadehenya evakadzi, achiratidza divi ravo rakaipisisa
Kubaya pahudyu uye clavicles